Naqshadeynta Alaabta & Naqshadeynta - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
Dongguan Chengda Rubber & Plastics Technology waa alaab farsamo oo silikoon ah oo caado ah & soo saaraha alaabada caagga ah, oo ku takhasusay samaynta silikoon iyo alaabada caagga ah iyo qaybo ka mid ah.
Kooxdayada injineernimada waxay leeyihiin khibrado naqshadayn iyo wax soo saar qani ah si ay fikradahaaga u noqdaan kuwo dhab ah, uga faa'iidayso aqoontayada iyo waayo-aragnimadayada si aan u gaabiyo wakhtigaaga suuqa.Waxaan sidoo kale u qaabayn karnaa alaabta sida waafaqsan fikraddaada.Haddii aad bixiso muunad, waxaanu 3D iskaan ku samayn karnaa muunada oo aanu helna nashqada 3D ee alaabta, ka dibna waxaanu wax ka beddeli karnaa naqshadaynta fikraddaada.
Adeegga Prototype ee degdega ah:
Sidoo kale, marka aad rabto in aad aragto oo aad dareento naqshadeynta qaybaha caagga ah ee caadiga ah ka hor inta aan la bilaabin samaynta caaryada, Chengda Rubber & Plastic waxay kuu soo saari karaan tusaalooyin degdeg ah, waxaan ku daabacan karnaa muunada daabacaadda 3D ama waxaan samayn karnaa muunad muunad ah oo ka samaysan muunado adiga.
Chengda Rubber & Kooxda iibka caagaga ah waa mid dulqaad badan oo fudud in lala xidhiidho, qofkayaga wax iibinaya wuxuu qaadan doonaa kooxda injineernimada si ay kula bilaabaan xiriir qoto dheer, oo ay ku jiraan qaab dhismeedka, dulqaadka, walxaha, midabka, shaqada iyo hufnaanta kharashka, waxay kaa caawinaysaa inaad hesho mid aad u wanaagsan. xal u ah mashaariicda silikoonka caadadii ama mashaariicda caag caadadii.